သတင်းများ - Twesix စွမ်းအင် Co. ,, Ltd မှ
တည်နေရာ: နေအိမ် » သတင်းများ
8 အထက်မြေပြင်ရေကူးကန်များအတွက် စာလုံးပုံစံ PVC အပြာရောင် အထပ်လိုက်အလွှာများ
မြေပြင်အထက် ရေကူးကန်များအတွက် ဘဲဥပုံ PVC အကာအကွယ် UV Pool Liners
Reach နှင့်အတူ မြေပြင်အထက် PVC အဝိုင်းပါ ရေကူးကန် Liner သည် UV Anti-UV ပါ၀င်သည်။
မြေပြင်အထက် ရေကူးကန်များအတွက် စျေးသက်သာသော ရေကူးကန်ငယ်များ
မြေပြင်အထက် ရေကူးကန်များအထိအတွက် Mini Pool Heat Pump6m³
တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဖြူရောင် ရေကူးကန် Cove Foam ထုတ်လုပ်သူ
Tips: 1、Fast Drying Period Before pushing the racks hanging sausage and bacon into the drying chamber, let the Twesix dehydrated machine discharge hot air to the temperature 60 ℃to 65℃,which can let sausage and bacon ferment, keep color and taste 2、Slow Drying Period Temperature at 52℃ to 54℃,humidity 45%, the drying time is3to 4hours 3、Fast Drying Period Temperature at 60℃ to 62℃,humidity 38%,the drying time is 10 to 12hours. After drying, the sausage and bacon contains 18% အစိုဓာတ်,which is best dried quality.
 persimmon origin Persimmon cake, also known as persimmon, isafamous traditional snack in China. Nutritional value is very high, mainly produced in Gongcheng Yao Autonomous County, Guangxi Zhuang Autonomous region, တရုတ်နိုင်ငံ, has more than 400 years of cultivation and processing history. Gongcheng moon persimmon fruit shape beautiful, bright color,athin skin, thick meat seedless, sweet and delicious, is the top persimmon.  air heat pump persimmon dryer Traditional persimmon drying, mostly using the sun natural drying method, greatly affected by the climate, drying process can not encounter rainy weather. Otherwise, it will be finished, and can not be remedied, even if reluctantly according to the process to the end, the persimmon is sour. Heat pump persimmon dryer,…
စာမျက်နှာ 1 ၏ 212»
ယူနစ် 101 နှင့် 201, အဆောက်အဦ 5, Keneng စက်မှုဇုန်. မရှိ. 39 Zhenghe တောင်လမ်း, Xincheng အသိုင်းအဝိုင်း, Leliu Str. , Shunde ခရိုင်, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်
နောက်ဆုံးပေါ်သတ္တု newsand ဖြစ်ရပ်များရဖို့သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ ...
မူပိုင် © အစားအစာအတွက် အပူပေးပန့်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပါ။, ရေကူးကန်အတွက်အပူစုပ်စက်, pool liner, ရေကူးကန်အဖုံး မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.